Buddhist Pilgrimage Tour including visits to Taj Mahal & Agra Fort - Myanmar Interlink Services Co.,Ltd.
Today Date: 19 / Jun / 2018
Bodhgaya Buddhist Pilgrimage Tour including visits to Taj Mahal & Agra Fort
Tour Price: All Inclusive Package Deal =US$1120 per person for 10 pax group (twin/triple-sharing STANDARD ROOM) Price offer valid till 31st March 2018 Tour Type: MIS/OT/12/17/GAYA-Delhi (Outbound) Tour Duration: 8 Days7Nights
This exclusive 8 Days &7Nights tour packages offers you all four most important sites of Buddhism:
Lumbini – Birth Place of Buddha.
Bodhgaya – Enlighten Place of Lord Buddha.
Varanasi – First Sermon of Lord Buddha.
Kushinagar – Mahaparinirvana Place of Lord Buddha
Shravasti – Place where Lord Buddha lived the longest amount of time, and where he gave the largest amount of discourses and instructions.
Rajgir – Place where Lord Buddha spent several months meditating, and preaching at Gridhra-kuta, (‘Hill of the Vultures) and where King Ajatashatru kept his father Bimbsara in captivity here.
Nalanda – isaUNESCO World Heritage Site ofalarge Buddhist monastery which was onceafamous center of Buddhist learning, also known as the Nalanda University and later became the longest running university in Indian history.
includingavisit to Taj Mahal (Wonder of the world & UNESCO World Heritage Site) and to Agra Fort (UNESCO World Heritage Site
BUDDHIST PILGRIMAGE TOUR including visits to Taj Mahal & Agra Fort
Day 1: Departure Yangon – Arrival Gaya airport International Airport, India.
Sightseeing of BODHGAYA ရန်ကုန်-ဂါယာ-ဗုဒ္ဓဂါယာ
Day 2: Pilgrimage tour from Bodhgaya to Rajgir / Nalanda / Bodhgaya ဗုဒ္ဓဂါယာ – နလန္ဒာ – ရာဇဂြိုလ် – ဗုဒ္ဓဂါယာ
Day 3: Pilgrimage tour from Bodhgaya to Varanasi ဗုဒ္ဓဂါယာ – ဗာရာဏသီပြည်
Day 4: Pilgrimage tour from Varanasi to Kushinagar ဗာရာဏသီ– ကုသိနာရုံ
Day 5: Pilgrimage tour from Kushinagar to Lumbini ကုသိနာရုံ – လုမ္ဗိနီ
Day 6: Pilgrimage tour from Lumbini to Sravasti လုမ္ဗိနီ – သာဝတ္ထိပြည်
Day 7: Pilgrimage tour Sravasti to Lucknow to Agra သာဝတ္ထိပြည် – လတ်ခ်နောင်းLucknow – အဂရာAgra
Day 8: Agra / Delhi + Departure
Departure New Delhi – Arrival Yangon အဂရာ-နယူးဒေလီ-ရန်ကုန်
Yangon-Gaya one-way trip MNA airfare
New Delhi-Yangon one-way trip Malindo Air
India Double Entry Visa
Nepal Visa – USD 25 per Person.
Visa application service fees
Train Fare: Lucknow to Agra in air-con chair class.
Hotel accommodation based on twin room sharing as per itinerary.
English speaking escort through out of tour for5pax onward, Below5pax, we provide local spot guide.
All fuel charge, Toll taxes, Driver allowance, interstate taxes etc.
Boat Ride at River Ganges at Varanasi.
Customer Tips to guide & driver (Normally it $ 03 per pax per day)
Any hike of Gov taxes,
expenses of personal nature such as Liquor, Laundry, Room service, Phone call, Camera fees
Porterages at Railway Station.
Any additional expenses caused because of flight delays/rescheduling/cancellations or conditions beyond our control,
Any Supplement charges for New Year/Christmas and any other Monument Entrances.
01 bottle of mineral water per pax.
Welcome Garland on Arrival.
Day 01: Arr. Bodhgaya (L/D)
On arrive Gaya airport. Welcome & assistances in airport, then you will be transfer to Bodhgaya hotel. After lunch, proceed to visit Bodhgaya visit Mahabodhi Temple, Sujata Village, Niranjana river, 80 feet high lord Buddha Statue & Various international monasteries. Dinner & Overnight atahotel in Bodhgaya.
ပထမနေ့– ရန်ကုန်-ဂါယာ-ဗုဒ္ဓဂါယာ
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ 10:30 အချိန်တွင် မြန်မာနေရှင်နယ် အဲလိုင်းဖြင့် စတင်ထွက်ခွာပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂါယာလေဆိပ်သို့မွန်းလွဲ 1:00 အချိန်တွင် ဆိုက်ရောက်ပါမည်။ ဧည့်လမ်းညွှန် မှ နွေးထွေးပျုငှာ စွာဖြင့် ကြိုဆိုပြီးလျှင် တည်းခိုရမည့်ဟိုတယ်သို. လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတယ်တွင် နေ.လည်စာ စားသုံးပြီးနောက် ကျန်ရှိသော အချိန်အတွင်း ဗုဒ္ဓဂါယာအတွင်း လှည့်လည် သွားလာ နိုင်ပါမည်။ သွားရောက် လည်ပတ်ရမည့် နေရာများမှာ မဟာဗောဓိ ကျောင်းတော်ကြီး၊ သုဇာတာရွာ ၊ ဘုရားအဖြစ် ဥာဏ်တော်အလင်းရပြီး ချိန်တွင် ပထမဆုံးရေသန်.စင်ခဲ့သော Niranjana မြစ်၊ ဥာဏ်တော်အမြင့် ပေ 80 ရှိသောဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံဆိုင်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း များအား သွားရောက် လေ့လာပါမည်။ ဟိုတယ်သို. ပြန်ပြီးနောက် ညစာစားသောက်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 02: Bodhgaya / Rajgir / Nalanda / Bodhgaya (B/L/D)
After breakfast, Excursion to Rajgir (71 Kms / 2,5 Hrs), visit Gridhkutta, Venuvanaram & Bimbisar prison. After lunch drive to Nalanda, visit ruins of ancient university. Evening drive back to Bodhgaya. Dinner & overnight atahotel in Bodhgaya.
ဒုတိယနေ့ - ဗုဒ္ဓဂါယာ – နလန္ဒာ – ရာဇဂြိုလ် – ဗုဒ္ဓဂါယာ
ဟိုတယ်၌မနက်စာစားသုံးပြီးချိန်တွင် ကားဖြင့် ရာဇဂြိုလ်ပြည် နှင့် နလန္ဒာ သိုသွားရောက်ပြီး ရာဇဂြိုလ်ရှိ ဂိတ်စကုတ်တောင် နှင့် ဗိမိသာရမင်း ကြီးအကျဉ်းကျရာ နေရာအပါအ၀င် အခြားသောနေရာများသို. ကျွမ်းကျင်သောဧည့်လမ်းညွှန်မှ လိုက်လံ ပို့ဆောင်ရှင်းပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် ရာဇဂြိုလ် ပြည်ရှိ 3star အဆင့် ဟိုတယ်တခုတွင် နေ့လည်စာစားသောက်ရပါမည်။ ထိုမှတဆင့် နလန္ဒာသို့ ရောက်ရှိရန် မိနစ်အနည်းငယ် ကားဖြင့် သွားရောက်ရပါမည်။ ရှေးဟောင်းနလန္ဒာတက္ကသိုလ် အားလေ့လာကြည့်ရှု့ရမည်။ (နလန္ဒာတက္ကသိုလ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိရှေးအကျဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲတွင် တခု အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။) ထို.နောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းကျောင်းသို. သွားရောက် လေ့လာပြီးဂါရာရှိဟိုတယ်သို. ကားဖြင့်ပြန်လည်ပို. ဆောင်ပေးပါမည်။ ဟိုတယ်တွင် ညစာစားသောက် ပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 03: Bodhgaya / Varanasi (B/L/D)
တတိယနေ့– ဗုဒ္ဓဂါယာ – ဗာရာဏသီပြည်
ဟိုတယ်၌မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးချိန်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန် မှ ဗာရာဏသီပြည် သိုသွားရောက်ရန် ကားဖြင့် လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပါမည်။ မြတ်စွာဘုရားတရားဦးဟောကြားရာ စာရာဏကျောင်းတော်နှင့် ဓမ္မေခစေတီတို့အား ဖူးမြှော်ကြပြီးနောက် သမင်ဥယျာဉ်သို. သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှု့ပါမည်။ သွားရောက်လည်ပတ်နေချိန်အတောအတွင်း နေ.လည်စာစားသုံးရပါမည်။ သွားရောက်လည်ပတ် ကြည့်ရှု့ပြီးအပြန်တွင် ဗာရာဏသီပြည်ရှိ3star အဆင့် ဟိုတယ်တခုတွင် ညစားစားသုံးပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 04: Varanasi / Kushinagar (B/L/D)
စတုတ္ထနေ့– ဗာရာဏသီ– ကုသိနာရုံ
မနက်စောစောအချိန်တွင် င်္ဂဂါမြစ်ထဲသို. နေထွက်ချိန်အမှီလှေဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှု့လေ့လာပါမည်။ ဟိုတယ်သို. ပြန်လည်၍မနက်စာစားသုံးပြီး ကုသိနာရုံသို. ကားဖြင့်ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည်။ လမ်းခရီးတွင် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု၌ နေ.လည်စာ စားသုံးပြီး ကုသိနာရုံ သို့ရောက်ရှိချိန်တွင် 3starအဆင့်ရှိဟိုတယ်တွင် ညစာစားသုံးပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 05: Kushinagar / Lumbini (B/L/D)
ပဉ္စမနေ့ ။ ကုသိနာရုံ – လုမ္ဗိနီ
ဟိုတယ်၌နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံရာ ကုသိနာရုံဌာနရှိရာ မဟာပရိနိဗ္ဗာန် စေတီတော် (သံဝေဇနိယဌာန)၊ တေဇောဓါတ် လောင်ကျွှမ်းတော်မူ သည့်နေရာနှင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရေသောက်သုံးတော်မူခဲ့သော Rambhar စေတီသို. သွားရောက်ကြည်ညို ဖူးမြှော်ရပါမည်။ ဟိုတယ်သို.ပြန်လည်၍ နေ.လည်စာစားသုံးပြီးနောက် လုမ္ဗိနီသို့ ကားဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာပါမည်။(Note: အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် ဗီဇာနှစ်ကြိမ် ၊ နီပေါနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ရန် ဗီဇာတစ်ကြိမ်သာလိုအပ်ပါသည်။) လုမ္ဗိနီသို.ရောက်ရှိပြီးချိန်တွင် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်၌ ညစာ စားသုံးပြီးနောက် အိပ်စက် အနားယူနိုင်ပါသည်။
Day 06: Lumbini / Sravasti (B/L/D)
Breakfast at hotel. Proceed to visit Holy Birth place of Lord Buddha. After visit back to Hotel. Lunch at hotel. Drive to Sravasti (225 Kms/5hrs.). On arrival, transfer to hotel. Dinner & overnight stay at hotel in Sravasti.
ဆဌ္စမနေ့– လုမ္ဗိနီ – သာဝတ္ထိပြည်
မနက်စာကိုဟိုတယ်၌သုံးဆောင်ပြီးနောက် မြတ်စွာဘုရားဖွားမြင်ရာ လုမ္ဗိနီအင်ကြင်းတောသို. သွားရောက်ဖူးမြှော်ပါမည်။ ဟိုတယ်သို.ပြန်လည်၍နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးချိန်တွင် ကားဖြင့် သာဝတ္ထိပြည်သို.ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည်။ သာဝတ္ထိပြည် သို.ရောက်ရှိပြီးချိန်တွင် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်၌ ညစာ စားသုံးပြီးနောက် အိပ်စက် အနားယူနိုင်ပါသည်။
Day 07: Sravasti / Lucknow / Agra (B/L/D)
Breakfast at Hotel. Proceed for visit Saheth (Jetvanaram) & Maheth (Angulimal Caves). Drive to Lucknow (170 Kms/4 Hrs.). On arrival, transfer to hotel for lunch. After then transfer to Railway Station to catch the Train for Agra. On arrival, transfer to Hotel. Dinner & O/N atahotel in Agra.
သတ္တမနေ.။ သာဝတ္ထိပြည် – လတ်ခ်နောင်းLucknow – အဂရာAgra
မနက်စာကို ဟိုတယ်၌သုံးဆောင်ပြီးနောက် အနာထပိဏ်သူဌေး၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြတ်စွာဘုရား သည် ၀ါတွင်း(၂၄)၀ါ တိုင်အောင် သီတင်းသုံးခဲ့သော ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်ရာ(အ၀ိဇဟိတဌာန) နှင့် အင်္ဂုလိမာလစေတီ၊ Saheth & Mahethသို. သွားရောက် လေ့လာပါမည်။ ပြီးနောက် Lucknow မြို.သို. ကားဖြင့် ခရီးဆက်မည်။ Lucknow မြို.ကို ရောက်ရှိသောအခါ ဟိုတယ်၌ နေ.လည်စာစာသုံးပြီး Agra မြို.သို. အမြန်ရထားဖြင့် ခရီးဆက်ရန် ဘူတာရုံ သို. ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။ Agra မြို. သို. ရောက်ရှိပြီး ချိန် တွင် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်၌ ညစာ စားသုံးပြီးနောက် အိပ်စက် အနားယူနိုင်ပါသည်။
Day 08: Agra / Delhi + Departure (B/L/D)
Breakfast at hotel. Proceed for sightseeing visit, Taj Mahal (Wonder of the world) & Agra Fort. Closed on Friday. After lunch drive to Delhi. On arrival transfer to airport to catch the flight for onwards destination.
အဌမနေ.။ အဂရာAgra – နယူးဒေလီ – ရန်ကုန်
မနက်စာကို ဟိုတယ်၌သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကမ္ဘာအံ့ဘွယ်ရာနှင့်ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စာရင်းဝင် Taj Mahal (Wonder of the world) & UNESCO World Heritage Site နှင့် ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် ခံတပ် Agra Fort သို. သွားရောက် လေ့လာမည်။ (အဆိုပါနေရာများ သောကြာနေ. ပိတ်ပါသည်။) နေ.လည်စာ စားပြီးနောက် နယူးဒေလီမြို.သို. ကားဖြင့် ခရီးဆက်ပါမည်။ နယူးဒေလီမြို.သို. ရောက်သည့်အခါ ရန်ကုန်သို. ပြန်ရန် လေဆိပ်သို. လိုက်ပါ ပို.ဆောင်ပါမည်။
QUOTATION: IN US$ / PER PAX – Cost is valid till March. 2018
အနည်းဆုံးငွေပေးချေသူခရီးသွားဦးရေပေါ်မှုတည်၍ ကုန်ကျမည့်ခရီးစရိတ် (လေယာဉ်ခ+ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေး+တည်းခိုခ+အစားအစာ အပါအ၀င်) +FOC(အခမဲ့)
Min. of 02 paying pax
Min. of 03 – 04 paying pax
Min. of 05 – 07 paying pax
Min. of 08 – 09 paying pax
Min. of 10 – 14 paying pax
Min. of 15 – 19 paying pax + 01 FOC
Min. of 20 – 24 paying pax + 01 FOC
Min. of 25 – 29 paying pax + 01 FOC
Min. of 30 – 35 paying pax + 02 FOC
** FOC on Twin sharing basis.
ပုံမှန်အားဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ.မှလိုက်ပါမည့် ခရီးသွားအဖွဲ.ခေါင်းဆောင်ကိုသာလျှင် FOC အခမဲ့ လိုက်ပါနေထိုင်ခွင့်ပေးလေ့ရှိပါသည်။
မှတ်ချက်။ ယခုခရီးစဉ်သည် လက်ရှိကာလပေါက်ဈေးကို အခြေခံပြီးလျှင် ၀န်ဆောင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး ပေးရန်ရည်၇ွယ်ပါသည်။ အပြန်လေကြောင်းခရီးစဉ်ကို Malindo Air (Budget Airline) အသုံးပြုထားသောကြောင့် ခရီးသွားရောက်မည့်ရက် နီးကပ်မှ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူပါက ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသောကြောင့် ယခုတင်ပြထားသောဈေးနှုန်းဖြင့် သွားရောက်နိုင်ရေးအတွက် လေယာဉ်စရိတ်ဖိုး ကြိုတင်ငွေ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် အတည်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Delta / Tathagat / R.K palace / Similar
Bodhgaya Regency / Sujata/ Similar
Hotel City Inn / Temple Town / Similar
Hotel The Amayaa / Grapevine / Similar
Hotel Adelphie Grand / Similar
Hotel Lotus Nikko / Om Residency / Similar
Dreamland Resorts / Zambala / Similar
Sara Shree / Buddhamaya Garden / Redsun / Similar
Hotel Lotus Nikko / Similar
Siris 18 / Crystal Inn / Pushp villa / Similar
Howard Park Plaza / Utkarsh Vilas / Similar.
Important note: In case the Hotel envisaged or normal category of Rooms are waitlisted / sold out, alternate hotels/category will be provided & we will keep you informed on the supplement / reduction involved.
Myanmar Interlink Services Travel & Tour @2018.Developed by Digital Dots